မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ၇၅ နှစ်မြောက် ဂုဏ ပူဇာ ~ Dhamma Sala (ဓမ္မသာလာ)
မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ၇၅ နှစ်မြောက် ဂုဏ ပူဇာ
၁၁-၇-၁၆ နေ့ ည(၇)နာရီမှာ ရေဆင်းကနေ မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ၇၅ နှစ်မြောက် ဂုဏ ပူဇာ တရားစခန်းပွဲကျင်းပရာ နေပြည်တော် လက်လုပ်တောင်တောရကို ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ တရားစခန်းပွဲကို နောက်ထပ်တည်ဆောက်ထားတဲ့ ခေါင်နန်းဘုရင်ဆိုတဲ့ ဓမ္မာရုံအသစ်မှာ ကျင်းပပြုလုပ်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ ကျမလည်း ကျောင်းမရောက်တာကြာပြီမို့ ကျမကိုမြင်တာနဲ့ နှုတ်ဆက်ကြတဲ့ အင်မတန် ရိုးသားတဲ့ ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို ပြန်လှန်နှုတ်ဆက်ရင်း အလုပ်ထဲမှာ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုတွေတောင် ပြေပျောက်သွားခဲ့ပါတယ်။
အလုပ်တာဝန်များကြောင့် ကျောင်းလည်းမရောက် သတင်းတွေလည်း ပိတ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက် ဆရာတော်ဘု၇ားကြီး ဘယ်အရပ် ကြွသွားသည့် သတင်းကိုတောင် အတိအကျမရ အများပြောစကားနဲ့သာ ပြောရသလိုဖြစ်တော့ သတင်းကမှားနေပါတယ်။
ဒီနေ့မှ ဆရာတော်ကြီး ယခုကျောင်းမှာသတင်းသုံးစဉ် အနားတွင် ပြုစုခဲ့သည့် ဆရာဦးထွန်းဝေနဲ့တွေ့မှ သတင်းကိုသိရပါတယ်။ ဆရတော်ကြီးထံမှာ တပါးသော ရဟန်းသည် ကျောင်းသင်္ကန်းမရှိဟုဆိုပြီး အလှူလာခံတဲ့အတွက် ဆရာတော်ကြီးဟာ မဟာမြိုင်တောကြီးထဲက ကျောင်းကို ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ သို့သော် ထိုရဟန်းသည် မဟာမြိုင်တောကျာင်းမှ ကန့်ဘလူမြို့နယ်ရှိ နောက်ဆုံးသီတင်းသုံးရာ ဥေယျဓာမ်ကျောင်းသို့ ပြန်ကြွလာတယ်ဆိုပါတယ်။
ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာ ထိုရဟန်းသည် မိမိသီတင်းသုံးရန်ပေးထားသော ကျောင်းတွင်သီတင်းမသုံးဘဲ မိမိသီတင်းသုံးသောကျောင်းသို့ ပြန်ကြွလာသည့်အတွက် ဥေယျဓာမ်ကျောင်းအား စွန့်သွားသည်ဟုသိရပါသည်၊
မှတ်ချက်၊ ကျမအား တိကျသော သတင်းပေးသည့် ဆရာဦးထွန်းဝေအား ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်၊
ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးသည်စစ်ကိုင်းတိုင်းကသာခရိုင် ဗန်းမောက်မြို့နယ် ရွှေနှစ်တောရတွင်အေးချမ်းစွာသီတင်းသုံးနေတော်မူပါသည်။
၁၃၇၈ ခုနှစ် တန်ခူးလကွယ်နေ့ နောက်ဆုံးထားပြီးအဝေးပရိသတ်အတွက်ဆွမ်းခံကြွချီတော်မူခဲ့ပါသည်။
တရားစခန်းပွဲ၏ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများတင်ပေးလိုသော်လည်း ကျမ ဘုရားပေါ်တွင် ဆ၇ာတော်ဘုရားကြီးအား စရဏဖြင့် ပူဇော်မှုပြုပြီး ဆင်းလာသောအခါ တရားစခန်းမှာ ည(၉)နာရီထိုးပြီဖြစ်သဖြင့် တန်းဖြုတ်ကုန်လေရာ ကျမမှာ ဓါတ်ပုံပင်ရိုက်ခွင့်မရလိုက်ပါ။
ဗောဓိရိပ်ငြိမ်ဆရာတော်ဘုရားလည်း ကျောင်းတွင်ရှိသဖြင့် ၀ါဆိုသင်္ကန်းကပ်ခါ ရေဆင်းသို့ ပြန်လာခဲ့ရာ ရေဆင်းရောက်သော် ည(၁၀း၃၀) ဖြစ်နေပါတော့သည်။
တရားတော်စာအုပ်များ ဒေါင်းယူရန် ဂန္တ၀င်ကျော် ရဟန်းတော်များ PDF Download ဟေမဝတသုတ္တန်တရားတော်.PDF D...
၀ိဇ္ဇာဆိုတာဘာလဲ။ တစ်လုံးထိ တစ်လုံးသိနဲ့ ပုတီးစိပ်တဲ့နည်း
(၂၉-၅-၂၀၁၂) မှ တလုံးထိ တလုံးသိ ဆုံးမစကား (ဆရာတော်ဘုရားကြီး မပဒါန်ဂူ၊ မိုးမိတ်တွင် ဆွမ်းခံသွားရာ ကားပေါ်တွင် နောက်လိုက်ပါ ဒကာများထဲမှ ပုတ...
နောက်ဖော်ကြည့် - အပြည့်၊ ရှေ့မျှော်ကြည့်- အမိ
ယာယီစံကျောင်းဖြင့် သီတင်းသုံးနေသော ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဆရာတော်ဘုရားကြီး ရသေ့ဘ၀ ဘုရားရှင်သည်သစ္စာလေးပါး အမှန်တရား အလု...
ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာ ၁၃၄၈ ခုနှစ်မှာ သံသုမာတောင်မှ ဖူးကြီး၊ ဖူးကြီးမှ ပြည်၊ ပြည်မှ မြေထဲ(အောင်လံ)သို့သွားရောက်ကျသည်။ အောင်လံမှအထွက်တွင် က...
၂၅-၃-၂၀၁၂ နေ့တွင် ညောင်ဦးမြို့မှ တဆင့်ခရီးစဉ်ဆက်လိုက်လာရာ ပခုက္ကူ ဧရာဝတီမြစ်တကျော ကားဖြင့် တစ်လမ်းလုံး မှတ်တမ်းများ ယူလာရာ မကွေးသို့နေ့ခင...
ထူးခြားသော စိတ်စွမ်းအင်-၁ (ရေဆင်း)
၁၉၉၇ ခုနှစ်၊ ဧပြီလထဲတွင် မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီး သုဝဏဏ်လျံတောင်မှ လားဟူ လီရှောများ နှင့်အတူ ဆရာတော်ဘုရားကြီး ပျဉ်းမနားသို့ကြွလာ ...
“ယေ စ ဗုဒ္ဓါ အတီတာ စ ယေ စ ဗုဒ္ဓါ အနာဂတာ ပစ္စုပ္ပန္နာ စ ယေ ဗုဒ္ဓါ အဟံ ၀န္ဒာမိ သဗ္ဗဒါ............... သုခိနော ၀ါ ခေမိနော ဟောန္တု သဗ္ဗသတ္တာ ဘ၀န္ဆု သုခိတတ္တာ"
မြန်မာ သက္ကရာဇ် ၁၃၇၄ ခုနှစ် ဝါဆို လဆန်း ၁ ရက်
ဒီဆိုဒ်လေးကို ၁၉. ၆ . ၁၁ နေ့ တွင်စတင်သည်
အခမဲ့ ဘုန်းတော်ကြီး ပညာသင်ကျောင်းများ (ညောင်ဦး)
(၁)ဇေတ၀န်ဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးကျောင်း www.jetawunbagan.blogspot.com (၂)ဂူကျောင်း ပရဟိတ ဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးကျောင်း www.gukyaung.blogspot.com
ကုသလ ကုသလံ အကုသလနံ ဓမ္မာနံ (1)
စာရေးသူ၏ စကား (21)
ဆရာတော်များ၏ ဓမ္မစာစုများ (5)
ထူးခြားသော စိတ်စွမ်းအင်များ (8)
ထူးခြားသော အရိယာ ၊ ၀ိဇ္ဇာများ (3)
ထူးခြားသောစိတ်စွမ်းအင် (သာစည်) (1)
ထူးခြားသောစိတ်တန်ခိုး (ရွှေဘို) (1)
နှင့် ဘလော့တင်သူ၏စကား (4)
ပါမောက္ခချုပ် အရှင်နန္ဒမာလာ ဘိဝံသ (1)
ပိဋကတ်တော် စာအုပ်များ (1)
ဗုဒ္ဓောရသ အရှင် က္ကုန္ဒာစရိယ (ဦးဗောဓိ) (ဗောဓိရိပ်ငြိမ်တောရ၊ မှော်ဘီ) (5)
မဟာမြိုင်ခရီး-၃ (အဆုံးပိုင်း) (1)
မဟာမြိုင်ဆရာတော် ဦးဇောတိက (8)
မဟာဗောဓိမြိုင်ဆ၇ာတော်ကြီးနှင့်ဆက်နွယ်နေသော အမှတ်တရစာစု (2)
ပြန်လည်ဖြည့်စွက်ရေးသားခြင်း update (1)
အမှတ်တရ မှတ်တမ်း (10)
အရှင်ဇနက ဘိဝံသ(ချမ်းမြေ့ရိပ်သာ ဆရာတော်ဘုရားကြီး) (1)
အရှင်ပညာနန္ဒ ဘိဝံသ(ချမ်းမြေ့ရိပ်သာ အနီးစခမ်း) (1)
ရွှေစေတီဆရာတော် နေပြည်တော်၏တရားများ (10)
နေ့အလိုက် ရှာမယ် Jul 12 (1) Feb 03 (1) Jan 11 (1) Nov 24 (1) Nov 23 (1) Sep 21 (1) Sep 20 (1) Jul 26 (2) Jul 24 (1) Jul 22 (1) Jul 06 (2) Jun 21 (1) Jun 16 (2) Jun 01 (4) May 28 (1) May 25 (1) May 20 (1) Feb 05 (1) Jan 28 (1) Jan 27 (1) Jan 25 (1) Jan 24 (1) Jan 23 (1) Jan 08 (1) Nov 14 (1) Oct 27 (1) Oct 21 (1) Oct 17 (1) Oct 16 (1) Oct 07 (1) Sep 03 (1) Aug 24 (1) Aug 19 (1) Aug 18 (1) Aug 13 (1) Aug 12 (1) Aug 11 (1) Aug 10 (1) Aug 09 (2) Aug 08 (2) Aug 07 (1) Jul 29 (4) Jul 28 (1) Jul 27 (1) Jul 26 (3) Jul 23 (4) Jul 16 (2) Jul 15 (2) Jul 07 (1) Jun 29 (1) Jun 17 (2) Jun 16 (2) Jun 02 (3) May 19 (1) May 10 (1) May 01 (3) Apr 29 (1) Apr 28 (1) Apr 24 (1) Apr 21 (4) Apr 11 (1) Apr 08 (1) Apr 07 (1) Apr 06 (1) Apr 03 (1) Apr 02 (2) Apr 01 (3) Mar 31 (2) Mar 21 (1) Mar 14 (1) Mar 11 (1) Mar 10 (1) Mar 09 (2) Mar 08 (1) Mar 03 (1) Feb 28 (2) Feb 27 (2) Feb 26 (1) Feb 25 (4) Feb 22 (2) Feb 19 (1) Feb 17 (2) Feb 15 (1) Feb 14 (2) Feb 13 (1) Feb 04 (2) Jan 30 (2) Jan 25 (2) Jan 20 (3) Jan 18 (2) Jan 17 (1) Jan 07 (3) Jan 06 (2) Jan 01 (3) Dec 29 (1) Dec 28 (2) Dec 24 (2) Dec 09 (1) Dec 02 (3) Nov 29 (1) Nov 24 (1) Nov 23 (2) Nov 21 (6) Nov 17 (1) Nov 13 (1) Nov 11 (3) Nov 07 (2) Nov 03 (2) Nov 01 (1) Oct 27 (1) Oct 22 (2) Oct 21 (1) Oct 20 (2) Oct 16 (3) Oct 12 (1) Oct 09 (1) Oct 07 (4) Oct 04 (2) Oct 02 (1) Sep 30 (5) Sep 28 (1) Sep 27 (1) Sep 24 (1) Sep 20 (2) Sep 19 (1) Sep 18 (2) Sep 16 (3) Sep 10 (1) Sep 09 (1) Sep 08 (3) Sep 07 (1) Sep 05 (1) Sep 03 (2) Sep 02 (3) Sep 01 (1) Aug 30 (2) Aug 29 (2) Aug 28 (3) Aug 27 (2) Aug 25 (4) Aug 24 (3) Aug 22 (5) Aug 21 (2) Aug 20 (2) Aug 19 (2) Aug 18 (2) Aug 17 (2) Aug 16 (6) Aug 15 (1) Aug 14 (1) Aug 12 (1) Aug 09 (2) Aug 07 (2) Aug 05 (2) Aug 02 (6) Aug 01 (2) Jul 31 (1) Jul 30 (5) Jul 28 (2) Jul 27 (1) Jul 25 (1) Jul 24 (3) Jul 23 (2) Jul 22 (3) Jul 21 (1) Jul 20 (1) Jul 19 (1) Jul 17 (1) Jul 15 (4) Jul 14 (1) Jul 13 (2) Jul 12 (4) Jul 11 (1) Jul 10 (2) Jul 09 (2) Jul 08 (1) Jul 07 (2) Jul 06 (2) Jul 04 (7) Jul 03 (1) Jul 02 (2) Jun 30 (1) Jun 28 (1) Jun 26 (2) Jun 25 (1) Jun 22 (1) Jun 21 (3) Jun 20 (2) Jun 19 (1) Jun 17 (3) Jun 15 (3) Jun 14 (1) Jun 13 (2) Jun 11 (2) Jun 08 (1) Jun 07 (2) Jun 05 (1) Jun 04 (2)
Tipitaka in Burmese Language
Dhamma Audio and Text
Dhamma Audio and Video (has some Dhamma Audios in English
Dhamma Audio, Text, and Video
Dhammaduta Ashin Chekinda’s 300 plus Dhamma Audio
Ashin Tsandardika (Shweparami Tawya)
Burmese eBooks and eMagazines
Access to Insight -- Readings in Theravada Buddhism
Abhayagiri Monastery -- Thai Forest Tradition of Theravada Buddhism
်from 30 March 2013
Metta Myaing Baeyee Download Link:
Copyright © Dhamma Sala (ဓမ္မသာလာ)
Design by အာကာဖြိုး(နည်းပညာ)